Miyey suurtogal tahay in Guardiola uu dib ugu laabto Bayern Munich? Waxaa ka jawaabaya wakiilkiisa - Hargeele - Wararka Somali State
(Manchester) 18 Nof 2019. Josep Maria Orobitg oo ah wakiilka macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in macalinka reer Spain uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa Etihad Stadium, isla markaana uusan ka fekereynin inuu baxo.
Warar dhawaan soo baxay ayaa waxay sheegeen inay suurtogal noqon karto in Pep Guardiola uu markale dib ugu laabto kooxda Bayern Munich, si uu u noqdo badelka Niko Kovač.
Qandaraaska Pep Guardiola ee kooxda Manchester City ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2021, wuxuuna u muuqdaa inuu sii joogi doono naadiga Sky Blue ilaa dhamaadka qandaraaskiisa.
Haddaba Josep Maria Orobitg oo ah wakiilka Pep Guardiola ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal” wuxuu ku sheegay:
“Kubadda cagta ma jiraan wax la hubo”.
“Laakiin waxaan la hadlay Pep Guardiola Arbacadii wuxuuna ii xaqiijiyey inuu shaqo fiican qabanayo isla markaana uu ku qanacsan yahay Manchester City, iyadoo qandaraaska uu ku joogo kooxda uu gaarayo illaa xagaaga 2021”.
“Ma jiro mas’uul ka tirsan Bayern Munich oo igala soo xiriiray arrimo ku saabsan mustaqbalka Pep Guardiola marka laga reebo saxaafadda”.